Nbupu ndepụta nke nhazi ala ala na Google Earth, site na Excel, na onyogho na ederede bara ụba - Geofumadas
Mbupụ ndepụta nke nhazi ala ala na Google Earth, site na Excel, na onyogho na ederede bara ụba
Machị, 2012 downloads, Google Earth / Maps
Nke a bụ ihe atụ nke otu Excel nwere ike isi zipu ọdịnaya na Google Earth. Ihe ikpe a bụ:
Anyị nwere ndepụta nke nhazi na usoro nhazi ala (lat / lon). Anyị chọrọ iziga na Google Earth, anyị chọrọ ka ọ gosipụta koodu nke mmasị, ederede na obi ike, ederede nkọwa, foto nke isi na hyperlink iji mepee ibe na ịntanetị.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke ihe anyị na-atụ anya igosi mgbe anyị pịa na isi:
Koodu bụ: XL-3458
Nke a bụ ihe anyị na-atụ anya ịhụ:
Ụlọ nke Mr. Joaquín Gómez Padre, bụ ebe Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Mba dị adị na mbụ, nke a na-eweghachite ugbu a dị ka ebe nchekwa ihe ochie nke National Institute of Anthropology na-echebe
Lee ibe na Intanet
Ọ bụ ezie na a ga-ebudata template ahụ, mmụọ nke isiokwu ahụ bụ ịkọwa otu esi eme ya n'onwe gị.
Ihe anyị na-ejide bụ ịmepụta mkpado HTML na ogidi dị iche iche iji nwee ike ịmekọrịta: Koodu maka nke a ga-abụ:
<img src=»http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg»Mbara =»144»Elu =168«>
<a href=»http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>Lee ibe na Intanet
Niile aha mmado na ga-egosi na ọ bụ akara dị iche, na-emechi ya na a nke dakọtara na Tinye.
Mgbe ahụ akara bụ akara iji gosi na ederede a nwere obi ike, n'ezie mechie ya
im bụ akara maka onyinyo ahụ, nke na-eburu ihe ndị dị ka obosara (obosara), elu (elu) na ntụziaka ebe onyinyo ahụ bụ (src)
N'ikpeazụ enwere aha maka njikọ njikọ, nke mepere
Ihe akara na-acha odo odo bụ afọ ojuju nke ga-agbanwe na ihe oyiyi ọ bụla, ya mere anyị ga-enwe mmasị ma hapụ ya n'ime mkpụrụ ndụ.
Enweghi ike ịlaghachi, ị ga-ahụ mgbe ahụ na arụ ọrụ concatenate ga-achịkọta ihe dị ka nke a:
= CONCATENATE(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=»,CELDA,»Mbara =»,CELDA,»Elu =»,CELDA,«><a href=»,CELDA,«>,CELDA,)
Nke na-egosi na anyị ga-ewere ogidi 8 iji chekwaa data niile anyị chọrọ igosi. Ọ bụ ezie na ndị nwere akara mmado na-eji akara ngosi = akara na mkpirisi abụọ, ọ gbagwojuru anyị anya n'ihi na Excel nke mbụ na-egosi ọrụ na nke abụọ ka eji kee ọdịnaya ederede. Emezuru nke a site na itinye ọdịnaya ndị ahụ na sel dị iche iche dị ka a ga - asị na ha bụ ederede.
N'ikpeazụ anyị nwere nke a:
Na iziga na Google Earth m etinye bọtịnụ nke sitere na faịlụ ahụ. N'ebe ahụ ị ezipụta ụzọ ebe faịlụ ahụ na aha ị na-atụ anya ka ị nweta nkọwa nke km mgbe egosiri na ogwe aka ekpe.
Ihe ndebiri ahụ nwere ihe ngosi ụfọdụ banyere hover n'elu sel iji gosipụta etu esi abanye data ahụ. Ke ofụri ofụri, ọ nendsche nwere nsogbu mgbe macros na-adịghị nyeere na mgbe ụzọ ebe faịlụ a na-eke na-adịghị writable.
N'ebe ahụ, anyị nwere ya, ị nwere ike ịchọta ọchụchọ site na koodu dị n'akụkụ ọnyà nke Google Earth, na ịpị igodo ahụ gosiputara dịka anyị tụrụ anya ya.
Download ihe atụ kml
Ọ chọrọ onyinye ihe atụ maka nbudata, nke ị nwere ike iji ya Paypal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
O nwere ike ime na, mgbe ị na-eji ngwa ahụ, otu n'ime ihe ndị a nwere ike ịpụta:
Njehie 75 - Ụzọ ntanetị.
Nke a na - eme n'ihi na ụzọ a kọwapụtara ebe faịlụ kml ga - echekwa agaghị enweta ma ọ bụ na e nweghị ikikere maka ihe a.
Ihu oma, ikwesiri itinye uzo na disk D, nke nwere ihe nfe di ole na ole karia disk C na-enwe.
Ihe ndị a na-apụta na North Pole.
Nke a na-emekarị na-eme n'ihi na anyị na windo, dị ka e gosiri na ntụziaka template na-arụ ọrụ, ọ ga-anọkwaghị n'ógbè na mpaghara panel:
-Itughari, maka nkeji nke mmebi
-Coma, maka ọtụtụ puku mmadụ
-Coma, maka nhazi ederede
Ya mere, data dị ka: Otu puku na narị asaa na iri asatọ na mita iri abụọ ga-ahụ dị ka 1,780.12
Foto ahụ na-egosi otú e si eme nhazi a.
Nke a bụ onyinyo ọzọ nke na-egosi nhazi na ogwe ntụziaka.
Ozugbo a gbanwere mgbanwe ahụ, a na-eme faịlụ ahụ ọzọ, mgbe ahụ, ihe ga-apụta ebe ọ bụ na Google Earth.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, dee akwụkwọ nkwado email editor@geofumadas.com. Ọ na-egosi ụdị windo ị na-eji.
Previous Post«Previous Sistemụ Ihe Ozi Ala site na iji Manifold GIS
Next Post Mmiri na map. naNext »
22 Na-aza "Mbupụ ndepụta ndepụta njikwa ala na Google Earth, site na Excel, nwere onyogho na ederede bara ụba"
Enwetarala m template, m ga-amụ ya na m ga-ede ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe. Daalụ g '
Ndewo, Jose Luis.
Anyị emezilarị njikọ ahụ.
Anaghị m ahụ njikọ iji kwụọ ụgwọ site na nnyefe ego. M si El Salvador. Daalụ
hanna kwuru, sị:
Achọrọ m ịzụta template ma enweghị m kaadị dịka m na-eme
Jenụwarị, 2013 na
Lelee, kedu ka ị ga-esi tinye arịrịọ ahụ. Nke a bụ ọmụmaatụ:
Ruben Alfredo kwuru, sị:
Download faịlụ Excel, enwere m ike ịnweta foto site na diski D: / obras / alc, biko zitere m nkọwa dịka m nwere ike bulite foto site na adreesị ahụ.
Ọ dị mkpa ka foto ndị ahụ nwee nha kpọmkwem? ma ọ bụ ị nwere ike ịrụ ọrụ na 4 foto mb
Ee, n'ezie ị nwere ike ịchọta okporo ụzọ mpaghara na kọmputa ma ọ bụ netwọk
eme atụmatụ na ọ ga-ekwe omume ịgụta ihe oyiyi echekwara na mpaghara PC ma ọ bụ na-eji ngwa netwọk. Daalụ
Enwere ike ngwa a na-agụ ihe oyiyi echekwara na mpaghara na-enweghị iji URL?
Oscar Melendez kwuru, sị:
Ndewo, enwere m mmasị n'ịzụrụ ndebiri gị. M si na Peru, ma mgbe m na-enye gị njikọ nnyefe nke akụ, agaghị m enweta ihe ọ bụla dị ka Aug itinye ego gị.
Anyị na-akwa ụta maka ihe ahụ merenụ, ma anyị edozilarị ya ma akwụ ụgwọ ụgwọ ahụ.
escosoft kwuru, sị:
M ga-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ndị plantilas ebe a na-enweghị ike
Mac enweghi igodo nchedo, ya mere enwere ike igbanwe ya.
Nbudata na-agụnye inwe ike ịgbanwe faịlụ isi ma ọ bụ macro ukwu nke usoro ihe omume ahụ na excel.
Ọ bụghị ọdịda ọdịda, ọ bụ na eserese nke Google agbapụla
DJ Esteban kwuru, sị:
N'ezie, oge m nwere na Google Earth bụ WGS84.
Ị chọpụtala ihe mere m ji enweta data m?
Ziga ha na leta ịhụ ha. Zitere m okpokoro na Excel na faili kml ọ na-ewepụta. editor@geofumadas.com
Lelee ma ọ bụrụ na ị na-eji Datum dị iche iche, Google Earth na-eji UTM WGS84.
Daalụ maka ọsọ dị na ihe ọ bụla mebiri. Agbanyeghị, mgbe m jiri faịlụ «kml» soro Google Earth, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ isi ihe nhazi na-apụta ma ọ bụ naanị ole na ole ka a na-ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1º na nke ikpeazụ nke usoro ahụ, mana ọ dị anya na ihe kwekọrọ (100 Kms. Pe. ). Ọ bịara na-agwụ m ike ime nnyocha na ihe ọ bụla. Enwere m ike izitere gị faịlụ ahụ na data ebudatara na ụfọdụ e-mail? Yabụ ị ga-ahụ ihe ga - eme. Daalụ
Nke ahụ bụ nsogbu mara, dịka edere ya n'elu.
Gbanwee ụzọ ahụ, ị ​​na-etinye faịlụ ahụ ka emepụtara gị na C: nke ahụ anaghị enyekarị ohere site na Windows ntọala. Jiri uzo ozo hu kwa na odi.
Usoro ihe omume a dị m ezigbo mma, ọ gbakwara m ọtụtụ nchọta ya.
Enwetara m ya na ịkwụ ụgwọ nke 2 $ mana ọ na - apụta na mgbe m mebiri ya anaghị arụ ọrụ ma ịdọ aka ná ntị pụtara na-ekwu, sị:
'Error' 75 'mere na oge ịgba ọsọ.
Njehie na abanye uzo ma obu file
M ga-enwe ekele ma ị nwere ike ịgwa m otu esi edozi ya maọbụ ma ọ bụrụ na i zigara m Excel faịlụ ọzọ, ozugbo enwere ike, n'ihi na aghaghị m ịkwadebe ọrụ nke ihe nnọchiteanya nke ọnọdụ ala ma abọ m n'oge.
Ọ dabere na mwepụ.
Ọ bụrụ na a chụpụrụ ha mita ole na ole (10 ruo 15 mita) ọ bụ n'ihi na a chụpụrụ google oyiyi, ị ga-ahụ ka ọ na-agbanwe onyogho na afọ ndị gara aga, ị ga-ahụ na ọdịdị ala ahụ adịghị mma. Ọ bụ ezie na nhazi ahụ ziri ezi.
Ọ bụrụ na mpụga ka ukwuu, ọ nwere ike ịbụ na ha bụ ndị na - ahazi akwụkwọ nchịkọta ọzọ. Google na-eji WGS84.
Ọ bụrụ na ndị achikota adaba na mpaghara ọzọ nke mbara ụwa, ọ nwere ike ịbụ na ị na-abanye latitude na ịdị ogologo ala na azụ. Ma ọ bụ na-ejighị akara ahụ: N'ebe ọdịda anyanwụ hemisphere ịdị ogologo na-adịghị mma, na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ ịdịpụrụ adịpụ adịghị mma.
Edgar Coronado kwuru, sị:
Onyinye dị ezigbo mma naanị na ị hụrụ na mgbe m tinyere nhazi m, ọ naghị egosi m kpọmkwem ebe ọ dị ... kedu ihe ị chere mere ọ ga-abụ?